उ यतिबेला राप्रपाको असली कार्यकर्ता भएको छ । सुरुमा काङ्ग्रेस, अनि एमाले, माओवादी जनयुद्धका बेलामा माओवादी, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका काङ्ग्रेसलाई भोट हालौं भन्दै हिडेको उ अहिले त राप्रपाको असली कार्यकर्ता बनेर नमस्कार गर्दै हिड्न थालेको पो देखियो । समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले मात्र जानेका हुन् कि अरुले समयलाई चिन्न नसकेका यतिबेला छुट्याउन साह्रै मुस्किल भइरहेको छ । विगतदेखि नै उसलाई नजिकबाट नियाली रहेका समाजका अनुभवी एवम् पाका मान्छेहरुले मलाई भनेपछि मलाई थाहा भयो कि उ त असली कार्यकर्ता रहेछ । असली त साह्रै असली तर कसको चाँही साह्रै असली कार्यकर्ता भनेर सोच्न थालेको टाउको फनफनी घुमेर रिङटा नै लाग्यो । गाउँमा एउटा क्रसर चलाएको छ, सोलारबत्तिको पनि व्यववसाय छ, हेटौंडा शहरमा पनि एउटा गज्जबको होलसेल पसल छ, बेलाबेला काठ सङ्कलन गर्ने र विक्री गर्ने आफ्नो पूरानो पेशा पनि परिआउँछ उसैको भागमा । अनि त किन असली कार्यकर्ता नहुनु नि पार्टीको ।
काङ्ग्रेसी समयमा गाउँगाउँबाट काठ ल्याएर विभिन्न ठाउँमा राम्रै दाम कमाएको थियो उसले । काङ्ग्रेसको असली कार्यकर्ता भनेर पार्टीले कति पटक सम्मान पनि गरेको थियो । पार्टी कार्यालयमा उ आउँने बितिक्कै उसलाई स्वागतका लागि फूलमाला लिएर केही मान्छेहरु तयार हुन्थे । सामान्य कार्यकर्ता तर किन यतिको सम्मान ? उसलाई राम्ररी नचिन्नेले जिब्रो टोक्थे । पार्टीमा महिनाको एक पटक जसो आफूले सकेको भेटी चढाउने मान्छे भएकाले पनि उसको पार्टी प्रमुखसंग समेत राम्रो सम्बन्ध थियो । पछि एमालेको असली कार्यकर्ता भनेर पनि उसले सकेको गर्यो । गाउँमा जनताका लागि अनुदानको सोलार बेचेर मालामाल बन्ने काममा उसलाई पार्टीले साथ दियो । विक्रीको केही कमिसन आफूलाई पनि आउँने भएपछि उसलाई असली कार्यकर्ता नबनाएर झोलामात्रै बोकेर लखर लखर हिड्नेको भाउ के हुनु ? चुनावका बेलामा होस् वा नेताको गाह्रो साह्रोमा आर्थिक, भौतिक सबै खालका सहयोग गर्नेमा पार्टीभित्र उ लोकप्रिय बन्यो । यतिसम्म लोकप्रिय बन्यो कि गाउँको वडाध्यक्षको टिकट नै झण्डै पाएको । उसको लोकप्रियता देखेर त्यो बेला कतिपय अरु पार्टी त्यागेर उसैको अघिपछि लागेका थिए । समयक्रमले उ जनयुद्धमा होमिएको माओवादीसंग मिलेर माओवादीकै असली कार्यकर्ता भयो । गाउँगाउँमा हुने अन्याय अत्याचार विरुद्घ बोल्नका लागि पार्टीले साथ दियो । गाउँ शहरका पैसावालसंग चन्दा माग्न पार्टीको नाम यति काफी बन्यो कि चन्दा तोकैर माग्न पाउँदा हेटौंडामा एउटा घर जोड्न उ सफल भयो । उसलाई चिन्नेहरुले भने,‘ पार्टीको असली कार्यकर्ता भए पो शहरमा घर ठडिनु त,सामान्य कार्यकर्ताको जिन्दगी त झण्डा बाकेर सभामा दौडदैमा बित्छ नि ।’
अहिले समय अर्कै छ । न अब जनयुद्ध लड्ने माओवादीको सपना बेचेर मालामाल हुन सकिन्छ न त काङ्ग्रेस–एमालेले नै मुलुकको हितका लागि काम गरेको देखियो । बरु सबै कुरा पाइने भनेको त राप्रपा नै भएकाले उ अहिले यही पार्टीको खाँटी कार्यकर्ता भएको छ । यो पार्टीको सिद्घान्त उसलाई मन परेको छ । गणतन्त्र मान्ने, गणतन्त्रको विरोध गर्ने, सरकारमा जाने, सरकारको विरोध गर्ने, संविधान मान्ने, संविधानमा हिन्दु धर्म भएन भनेर विरोध गर्ने, संघीयताको प्रचार गर्ने सरकारको अभियानमा लाग्ने संघीयता ठिक छैन भन्ने सबै सिद्घान्त मिल्ने पार्टी यतिबेला यो पार्टी भएकाले उ यो पार्टीको असली कार्यकर्ता भएको हो । यो पार्टीको सिद्घान्त भनेको फेरी आफ्नो मनको भावना पनि हो, मनले जे सोच्यो त्यसलाई सिद्घान्त मान्दा पनि भइहाल्यो । आफूले सोचेजस्तो, खोजेजस्तो पार्टी पाएपछि यो पार्टीको असली कार्यकर्ता हुन छाडेर अरु ताइ न तुइका पार्टीमा लागेर भविष्य किन खेर फाल्नु भन्नु भन्ने उसलार्इं लागको छ ।